सावधानी! तपाईको खाता जुनसुकै बेला ह्याक हुन सक्छ! ५ रुपैयाँमा बिक्दै छ महत्त्वपूर्ण डाटा, यसरी सुरक्षित रहनुहोस् – www.agnijwala.com
सावधानी! तपाईको खाता जुनसुकै बेला ह्याक हुन सक्छ! ५ रुपैयाँमा बिक्दै छ महत्त्वपूर्ण डाटा, यसरी सुरक्षित रहनुहोस्
आजको समयमा, प्रविधि र इन्टरनेटले हाम्रो जीवनलाई जति समाधान गरेको छ, यसले ठूलो खतरा पनि खडा गरेको छ। सबै कुरा अनलाइन गर्ने यो युगमा साइबर चोरीका घटनाहरु निकै बढेका छन् । ह्याकरहरूले तपाईंलाई धोका दिने हरेक सम्भावित तरिका जान्दछन् र कुनै पनि मौका आफ्नो हातबाट जान दिँदैनन्। तपाईलाई थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ चोरहरूले तपाईको व्यक्तिगत डाटा मात्र रु5मा बेच्छन्, हामीलाई थाहा दिनुहोस् तपाई कसरी सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ।
यसरी ह्याकरहरूले तपाईंको महत्त्वपूर्ण डाटा लिन्छन्
साइबर अपराध देशको मात्रै नभई विश्वभर नै ठूलो समस्या हो । धेरै पटक ह्याकरहरू विभिन्न तरिकाले तपाईको स्मार्टफोनमा प्रवेश गर्छन्, जबकि प्रायः यस्तो हुन्छ कि ह्याकरहरूले सार्वजनिक वाइफाइ, जेरोक्स मेसिन, साइबर क्याफे, बैंक, टेलिकम कम्पनीहरू आदिबाट तपाईको डाटा निकाल्छन्, त्यसपछि तपाईलाई ब्ल्याकमेल गर्न वा सिधै चोरी गर्न सजिलो हुन्छ। ।
डाटा प्राप्त हुनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ
तपाईलाई भनौं कि तपाईको प्राइभेट डाटा ह्याकर्सको हातमा आउने बित्तिकै उनीहरुले तपाईबाट पैसा निकाल्ने वा अन्य कुनै किसिमको चोरी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छन्। डाटा कारोबार साइबर चोरी मा एक ठूलो व्यापार हो। यदि कुनै गिरोहले तपाईलाई धोका दिइरहेको छ भने, एक व्यक्तिलाई छुट्टै डाटा डिलिङको जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, तपाईलाई थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ कि झारखण्ड देशमा साइबर चोरहरूको गढ हो, जामतारा शहरलाई साइबर चोरहरूको विश्वविद्यालय मानिन्छ।
तपाईको डाटा ५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ
सायबर साइबर चोरी गरेपछि ह्याकरहरूले तपाईको व्यक्तिगत डेटा बिना सोचाइ बेच्छन्, तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। अपराध अनुसन्धान विभाग (सीआईडी) को एक रिपोर्ट अनुसार, ह्याकरहरूले तपाइँको व्यक्तिगत डाटा, जस्तै तपाइँको ठेगाना, फोन नम्बर, बैंक विवरण आदि धेरै कम मूल्यमा बेच्छन्। भारतको साइबर सेलबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कोलकाता र यसका छेउछाउका मानिसहरूको डाटा प्रतिव्यक्ति ५ रुपैयाँमा मात्र उपलब्ध गराइन्छ। यसको सीधा मतलब यो हो कि तपाईको डाटाको अरु कसैको लागि कुनै मूल्य छैन र यस्तो अवस्थामा तपाईले साइबर चोरीको जालमा फस्नबाट जोगिनु पर्छ।
साइबर चोरी र अनलाइन ठगीबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईंले अनलाइनमा भइरहेका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, ताकि तपाईं कुनै पनि ठगी वेबसाइट वा फिसिङ मेलको सिकार नहोस्। आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होसियार र सतर्क रहनु हो र आफ्नो आँखा र कान सधैं खुला राख्नु हो ताकि कसैले तपाईंलाई धोका नदिनु होस्।↔